Home / समाचार / के हो ‘होलबडी’ चेकअप ? के-के जाँच गरिन्छ? कुन अस्पतालमा कति शुल्क लाग्छ ? जान्नुहोस
के हो ‘होलबडी’ चेकअप ? के-के जाँच गरिन्छ? कुन अस्पतालमा कति शुल्क लाग्छ ? जान्नुहोस 0
ललितपुर ग्वार्कोमा रहेको बी एण्ड बी अस्पताल पूर्ण निजी तवरले संचालित अस्पताल हो। विभिन्न ठूला रोगको उपचार हुने बी एण्ड बी अस्पतालमा होलबडी स्वास्थ्य परीक्षणलाई दुई समूहमा छुट्याइएको छ। पहिलो समूहअन्तर्गत सामान्यतः पूर्व जानकारी लिन गरिने होलबडी परीक्षण पर्दछ। पैसाका कारण परीक्षण नरोकियोस् भन्ने उद्देश्यले यो समूह तय गरिएको अस्पतालले जनाएको छ। जसको शुल्क ३ हजार पाँचसय लाग्दछ।
५ मिनेटमै यसरी चिनीको प्रयोगले काखीको कालो दाग र रौ हटाउनुस् !